R/wasaare Sharma’arke oo ka hadlay qorshahiisa siyaasadeed uu dalka ku hogamindoono (Dhageyso+Sawirro) – Radio Muqdisho
R/wasaare Cumar C/rashiid oo marti ku ahaa barnaamijka kulanka todobaadka ee ka baxa Radio Muqdisho iyo Telefishinka Qaranka ayaa ka hadlay qorshayaashiisa siyaasadeed ee uu doonayo inuu ku hoggaamiyo dalka.
Mudane Cumar C/rashiid R/wasaaraha cusub oo si rasmi ah shalay xilka ula wareegay ayaa sheegay inuu dalka hirgelin doono xasilooni siyaasadeed oo ku saleysan waaqiciga jira.
R/wasaare Sharma’arke ayaa hoosta ka xariiqay inuu mudnaanta siindoono soo celinta amniga dalka, isagoo xusay in sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta dowladda loogu soo celin doono deegaannada ay weli ku harsanyihiin maleeshiyaadka Alshabaab.
Mudane Sharma’arke oo ka hadlay dhismaha ciidamada ayaa sheegay in dhismaha ciidanku ay ku xirantahay xasilinta siyaasadda dalka, wuxuuna intaasi raaciyay in lagama naarmaan ay tahay in la helo ciidan leh astaan qaran oo laga qoray gobollada dalka oo dhan.
Wuxuu tilmaamay R/wasaaraha in uu soo dhisi doono xukuumad an ka badnaan doonin 25 wasiir, kuwaasoo sida uu sheegay lagu soo xuli doono aqoon, karti iyo wadaniyad.
Mudane Sharma’arke ayaa ku cel celiyay inuu la dagaalami doono waxa la yiraahdo musuq maasuqa, isagoo ku tilmaamay musuqa inuu caqabad yahay horumarka dalka.